Duuliyaha kaliya ee Afar diyaaradood kasoo riday Yahuudda oo geeriyooday.
Mas'uuliyiin katirsanaa maamulka deegaanka Garasbaalleey oo ku dhintay qarax Muqdisho ka dhacay.
Itoobiya oo ciidamo soo dhoobtay Al Fashaqah iyo Abiy oo digniin culus udiray Suudaan.
Monday June 15, 2020 - 08:48:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa shalay magaalada Dhaka ee caasimadda dalka Bangaladheesh ku geeriyooday mid kamida duuliyaashii dagaalka kuwoodi ugu caansanaa casrigan.
Cazaam ayaa ahaa duuliye taariikhda baal dahab ah ka galay
Duuliye Seyfullaah Al-Acdam ayaa geeriyooday isagoo 80 sana jir ah, wuxuu ahaa duuliyaha kaliya caalamka ee Yahuudda mar qura kasoo riday 4 diyaaradood.
Sida ku cad taariikhdiisa wuxuu kamid ahaa saraakiishii ugu sarraysay ciidanka cirka dowladda Pakistan ka hor intii aan lakala qeybin dhulka qaarad u ekaha Hindiya 1947,
Sanaddii 1958-dii ayuu Seyfullaah ku biiray ciidanka cirka Pakistan isagoona sanaddii 1963-dii noqday sarkaal duuliye xirfad sare leh islamarkaana kasoo muuqday jabahaadka dagaalka.
Seyfullaah ayaa wacadaro ka dhigay dagaalkii u dhaxeeyay dowladaha Carabta iyo Yahuudda sanadkii 1967-dii, lixdii maalmood ee uu dagaalkaas socday ayuu ciidamada Yahuudda kasoo riday afar diyaaradood isagoona dilay ciidamadii saarnaa diyaaradahaas.
Cazaam oo ku magac dheeraa magaca Seyfullaah wuxuu lahaa khibrad fariid ah oo dhanka duulista ah waxaa la sheegaa in uu ahaa duuliyaha kaliya ee usoo shaqeeyay ciidamada cirka Afar dowladood kuwaas oo kala ah Pakistan,Urdun,Ciraaq iyo Banghaladeesh.
Sanadihii 1967 illaa 1973 ayay dowladda Pakistan 16 duuliye oo xirfad leh udirtay dowladaha Carabta oo xilligaas dagaal ba'an ay kula jireen waxa loogu yeero Israa'iil waxaana la sheegaa in Cazaam uu ahaa duuliyaha kaliya ee diyaarado dhulka kasoo dhigay Yahuudda.
Inta badan hoggaamiyaasha muqaawamada Filasdiin ayaa ka tacziyeeyay dhimashada Seyfullaah Al-acdam oo aan gudaha dalka Banghaladeesh wax taariikh ah ku laheyn sababa laxiriira dowladda wadankaas ka jirta oo siyaasad ahaan bah wadaag la ah Hindiya iyo Yahuudda.
Duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Yahuudda oo lagu dilay Tobanaan Maleeshiyaad Shiico ah.
Alfurqaan Oo Bayaan Kasoo Saartay Duqeyntii Maraykanka Uu Ku Dumiyay Idaacadda.
Afar Askari Jabuutiyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay Hiiraan.
Video: Shacabka Falasdiin oo dhagax kusoo riday Diyaarad Drone ah!
Dowladda Marocco oo Xiriir saaxibtinimo la sameysatay Yahuudda!
Ciidamo Yahuudda oo wiil dhalinyaro Falasdiini ah ku dilay magaalada Ramalla.